Apho unokufumana khona iiRugs zeNdawo eNkulu - Ikhaya Design Accents
San Francisco Iihotele
Apho unokufumana khona iiRugs zeNdawo eNkulu
Ngelixa umndilili wobukhulu bemigangatho inokusebenzela amagumbi amaninzi, ngolwakhiwo olutsha, amagumbi amakhulu afuna iirugs ezingaphezulu. Uninzi lwabantu lucinga ukuba lukhawulelwe kumbhoxo obanzi obuziimitha ezili-12, kodwa zininzi iiragi ezinkulu ezongezelelweyo ezifumanekayo kwigumbi lakho lokulala elinendawo yokuphana, igumbi lokuhlala okanye amanye amagumbi ekhayeni lakho.
Ukuqokelelwa kwabakhenkethi basekhaya
Amakhulu eepateni zombhoxo, izitayile kunye nobukhulu bunokufumaneka Ukuqokelelwa kwabakhenkethi basekhaya ngokobungakanani bombhoxo obukhulu ngakumbi. Ukongeza koxande oluqhelekileyo okanye iimilo ezijikelezileyo, unokufumana isikwere kunye ne-octagon emise iirugs ezinkulu ezongezelelweyo.
14 Iingcamango zeGumbi lokuPhila eliDlamkileyo: Igalari yefoto
Uhlobo lwe-Eclectic yoyilo lwangaphakathi: I-8 Ngaphandle-kwiBhokisi yeeNgcaciso
Iingcinga ezihonjisiweyo zeKhitshi eli-16: Ukusuka kwimixholo ukuya kwiiSikimu
Qiniseka ukuba ujonga ikhonkco leentengiselwano kunye neCandelo lamaZiko akhethekileyo ngezaphulelo zamaxesha ngamaxesha kunye nolondolozo olukhulu. Ezinye iiragi zikwanazo nesisa simahla xa uthenga ngoko, njenge:
Umbhoxo wasasazi wasimahla
Iphedi yangasemva yasimahla
Ukuhanjiswa simahla ngentlawulo yokuqhubekeka / yokuhambisa ngenqanawa malunga ne- $ 8.00
Uphengululo oluvela kubaQokeleli beKhaya abaHleli bokuhombisa bahlala benethemba malunga neerugs ezijongeka njengokuboniswa kwiwebhusayithi kunye namava abo ngenkonzo yabathengi.
Ubungakanani kunye namaxabiso
Iibhola ezingaphezulu ezikhoyo zibandakanya:
12x15, 12x16, 12x18
Uluhlu lwexabiso: $ 500 - $ 9,999
Qiniseka ukuba ufunda iinkcazo ngokugqibeleleyo kuba uninzi lweerugs ezenziwe ngocwangco. Ezi zixhobo zilikhulu ngokwesiqhelo zihlala zingenakubuyiselwa.
UKarastan Shapura Bel Canto Rug
Macy's inokhetho olukhulu lweerugs ezingaphezulu kwexabiso kuluhlu olubanzi lwamaxabiso, imibala kunye nezitayile. Unokukhangela ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngexabiso, umbala, ifayibha, ulwakhiwo, ilizwe okanye isitayile. Unokufumana ubusela bokwenyani xa inkampani ibeka iiragi ezikhethiweyo kwintengiso ngama-50% ngaphantsi kwexabiso eliqhelekileyo.
Ezimbalwa iiragi zinophononongo lwabathengi bakaMacy kwaye zilunge kakhulu ngokubhekisele kumbhoxo njengoko ubhengeziwe.
I-Macy inikezela ngenqanawe yasimahla kwimigca yeedola ezingama-99 nangaphezulu. Kukho umrhumo othe tyaba we- $ 9.95 wokuthenga ngaphantsi kwe- $ 99. Ezinye iiragi, ezisekwe kubungakanani kunye nobunzima okanye iimfuno ezizodwa zokuhambisa, zinexabiso elingaphezulu kwe- $ 30 okanye eyi- $ 40.
Imizekelo yobukhulu obukhulu ngakumbi obukhoyo:
Uluhlu lwamaxabiso: $ 866.97- $ 8,399.00
Iingubo zePlush Unokhetho olulungileyo lweerugs ezinkulu kubandakanya iimilo zesikwere. Unokukhangela iwebhusayithi ngokudibanisa iikhrayitheriya, ezinje ngobungakanani, umbala, ukuluka, izinto, isitayile, imilo, imvelaphi (ilizwe), uphawu, kunye nexabiso elincinci / elona xabiso liphezulu. Enye into eluncedo kakhulu kwiwebhusayithi ibhloko yokutshintsha umbala etsala umbhoxo ngamnye kunye nezikwere ezimele umbala ngamnye kumbhoxo. Ungayisebenzisa le gridi ukufumana ezinye iiragi kuluhlu olufanayo lombala.
I-FM-7013 (isibhakabhaka) evela kwingqokelela yeForam ePlush Rugs
Zonke iiragi ziza newaranti. Kuxhomekeka kumenzi, iiwaranti ziphakathi kweminyaka eyi-1 ukuya kwengama-20. Kuya kufuneka ujonge uluhlu lwerugthi nganye ukuqinisekisa ubude kunye neemeko zewaranti.
Umgaqo-nkqubo wokubuya weentsuku ezingama-30. Umthengi uhlawula iindleko zokubuyisa ukuhambisa, ngaphandle kokuba umbhoxo ufike wonakele okanye uneziphene okanye iodolo engalunganga.
Ixabiso le-Beat Competitor: I-Plush Rugs 'iya kubetha naliphi na ixabiso lomncintiswano nge-10% yomahluko wamaxabiso amabini.'
Ukuhambisa simahla kwilizwekazi laseMelika.
Inkampani ayithathi iiodolo zamanye amazwe.
IiPlush Rugs zinika ubungqina babathengi obuhlala buhleli malunga nomgangatho, inkonzo kunye neerugs njengoko zipapashiwe.
Indawo efanelekileyo yokukhulisa usapho eFlorida
Ii-rugs ezinkulu ezongezelelweyo ziyafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo obandakanya:
12x14, 12x15, 12x18
Uluhlu lwexabiso: $ 250- $ 6,999.99
Iirugs ngqo ibonelela ngaphezulu kwe-70,000 yegama lophawu lendawo iiragi ezivela kubavelisi bombhoxo abakhokelela kwihlabathi. Iingcali zokuhombisa ngebhola yendawo ziyafumaneka ukukunceda ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ngexesha le-9: 00 AM ukuya kwi-6 PM ngexesha leMpuma.
Kukho ukhetho olubanzi lwesitayile, imibala kunye neentsinga kunye neemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu kuyilo lombhoxo wendawo.
Ukuhambisa simahla kwi-odolo ezininzi kwi-U.S.
$ 6.95 yokulungisa kunye nokuphatha umrhumo osetyenziswe kuzo zonke iiodolo.
Ukuhanjiswa komgangatho osezantsi wokuthambisa iiragi ezingaphezulu simahla kuthengiso oluninzi.
Ukuhanjiswa ngokuthe ngqo, okukhethekileyo 'kweglavu emhlophe' kuyafumaneka ngexabiso elongezelelweyo.
Umdlalo wexabiso lomncintiswano: i-110% yokuQiniswa kwamaxabiso
Zonke iiragi zineeNtsuku ezingama-30 zoMngcipheko-wasimahla kuvavanyo lwasekhaya (ngaphandle kweerandi ezenziwe ngokwezifiso okanye zoSetyenziso). Ungabuyisa indawo yakho yombhoxo ngeli xesha 'kungekho mibuzo ibuziweyo.' Umthengi unoxanduva lokuhlawula iindleko zokuthumela ngenqanawa.
Umbhoxo wokuqala wokuqala womgangatho unewaranti yonyaka omnye opheleleyo ukusukela kumhla wokuthenga. Iwaranti iqinisekisa ukuba ityali yakho iya kulungiswa okanye itshintshwe ngokokubona komenzi ngaphandle kwentlawulo.
Impendulo evela kubathengi beRugs ngqo inika amanqaku aphezulu ngokungaguquguqukiyo; abathengi abaninzi baphinda abathengi. Amagqabantshintshi ngomgangatho kunye neerugs ziyinyani kwiifoto ezikwi-Intanethi kunye nokumelwa.
Iirugs ziyafumaneka ngobukhulu obukhulu ngakumbi kubandakanya:
10 ', 12'
Uluhlu lwexabiso: $ 579 - $ 11,559.20
Ukuthengiswa mva inikeza abanye abenzi bemigangatho abaziwayo abaziwayo, njengeHarounian, Karastan, Nourison, Abaluki baseMpuma nabanye. Thenga ngombala, isimbo, uphawu, izinto okanye ukuluka.
Inkampani inikezela ngesilingo sasimahla seentsuku ezingama-30 ngokubuyiselwa imali ngokupheleleyo. Inkampani ikwabonelela ngenqanawa yokubuya simahla kweerugs ezinamaxabiso angama- $ 300 okanye nangaphezulu kunye nerug yokutshintsha yomthengi.
Ukuphononongwa kwabaThengi kuthakazelelwa bubugcisa, ukuhlala ixesha elide kunye nenkonzo ebalaseleyo kubathengi. Uninzi luchaza ukuba bangabathengi abaphindayo ngoku okanye baya kwenza ukuthenga kwixa elizayo.
Uluhlu lwexabiso: $ 1,399.00- $ 4,899.99
Ukuhanjiswa simahla kwilizwekazi laseMelika.
I-Adelphi kunye ne-Oriental Rug
ukuthandana Lidume kwihlabathi liphela ngokuba lingaphezulu kwento nje yasekhaya, kodwa liyinyani imisebenzi yobugcisa ngabachwephesha abaziingcungela kumakhaya aphambili.
Ubuninzi bobugcisa buya kudala ityali nganye. Iinkcazo zemibhoxo ebonelelwe kwiwebhusayithi zinika iinkcukacha zemisonto esetyenzisiweyo, imbali yoyilo -into yayihlala iphefumlelwe kuyilo lwakudala- kwaye kwakutheni ukuze kukhethwe imibala ethile. Zonke iiragi zenziwe kusetyenziswa iindlela zokuvelisa eziluhlaza.
Ezinye iiragi zinemibala engama-300 esetyenzisiweyo ukufumana ubutyebi kunye nobunzulu bokuyilwa kwezi zinto zobugcisa zodwa. Ukuba ujonga umbhoxo oya kuba lilifa losapho, emva koko unokuthatha isigqibo sokutyala imali kwenye yezi rug. Abantu abaninzi bade bakhethe ukusebenzisa iitagi zabo njengeetheyiphu zodonga ukubonisa umgangatho wobugcisa.
Unokukhangela ngombala, isitayile, ubume, iimilo kunye nobukhulu.
Ukuqina kuvavanywa e-USA.
Kukhuselekile kubantwana nakwizilwanyana zasekhaya
Ubungakanani obukhulu bemigca ebandakanya:
Uluhlu lwexabiso: $ 9,520 - $ 26,880
Ndwendwela blog yothando kwaye ufunde izithuba ngabaqulunqi bangaphakathi ngeengcebiso ezintle zokusebenzisa ezi ndawo zerugs kuseto lwegumbi ezahlukeneyo kunye uyilo kunye nobungqina bomthengi ngamnye .
Ukuqwalaselwa xa kuthengwa iiRugs zommandla oPhezulu
Kuhlala kungumbono olungileyo ukujonga ngokwenyani umbhoxo onqwenela ukuwuthenga. Ungandwendwela amagumbi okubonisa umboniso ukuze ubone ukuba umbhoxo yiyo yonke into eboniswe kwi-intanethi. Ungaseta malunga nokuthenga ngexabiso. Ukuba awukwazi ukufumana umbhoxo kwigumbi lokubonisa lasekhaya, jonga iwebhusayithi ukuze ubone ukuba ngaba iisampulu zingathunyelwa kuwe. Abathengisi bombhoxo bahlala bebonelela ngeesampulu zombhoxo ezincinci, ngakumbi iirugs ezibiza kakhulu.
Ngaphambi kokufaka iodolo, qiniseka ukuba uyaziqonda ngokupheleleyo izikhokelo zokuhambisa ukuze ungapheli kunye nayiphi na intlawulo yokumangala okanye iintlawulo. Nje ukuba umbhoxo wakho uhanjiswe, kunokuthatha iintsuku ezimbalwa ukuba umbhoxo uphumle (imiphetho iwela phantsi), kuba yayithunyelwe yaqengqeleka. Kuya kufuneka ukonwabele umbhoxo wakho iminyaka emininzi ezayo.
Ubuhlanga Ulusu Care Ukubhala Prompts Iimveliso Zefeng Shui Iifayile Zesan Francisco Ukurisayikilisha
Ngaba naziphi na iintsana ze-beanie zixabisa imali
ulisusa njani ibala lamanzi kwiglasi
amagama awodwa amantombazana amantombazana aqala ngo
Ngaba u-leo no-gemini bayavana
amagama amantombazana aqala ngo-st
ithetha ntoni ipolishi emnyama yamazipho